Yentlalontle njani iB2B? | Martech Zone
Yentlalontle njani iB2B?
NgoLwesibini, Oktobha 30, 2012 Douglas Karr
Sibuze nje, Kutheni le nto ingeyiyo iNtengiso yakho kwiNtlalo? ke le infographic ayinakuba nexesha elingcono! I-61% yabathengisi baseMelika basebenzisa imithombo yeendaba zentlalo ukwandisa isizukulwana sabo esikhokelayo. Indlela eyiNtlalontle ngayo iB2B yi-infographic evela kwi-InsideView ebonelela ngezibalo eziqinileyo kunye neminye imizekelo emihle yendlela amashishini asebenzisa ngayo imithombo yeendaba zentlalo ukukhulisa ukuthengisa kwabo kushishino ukuya kwishishini kunye neziphumo zentengiso. Izikhokelo ezininzi kunye nokuvala ngokukhawuleza… ngaba ufuna ngaphezulu kwesizathu?
Besitshilo kalikhulu… kodwa amathemba akho sele eluntwini ekhangela iimveliso kunye neenkonzo zakho. Umbuzo ngowokuba kutheni ungekho?
tags: b2bb2b imidiya yoluntuisizukulwana esikhokelayoUkunika amandla ukuthengisaImidiya yokuncokola
Iindidi zePosti yesiqhelo eneendidi zesiko
Okt 31, 2012 ngexesha 5:36 AM
Enkosi ngoku kwakhona infographic. Awuzange usilele ukugubungela izihloko ezoyikisayo zokuzithumela rhoqo emva koko. Ndiyayithanda indlela ozekelisa ngayo uhlobo lwe-B2B yendlela yeshishini kumajelo eendaba ezentlalo kodwa umbuzo omnye, ngaba iyasebenza xa useyisiqalo? okanye kufuneka wakhe igama lakho kwi-intanethi kuqala?
Okt 31, 2012 ngexesha 11:55 AM
@Hezi Ndiyakholelwa ukuba ukuqaliswa kunokuba nempembelelo enkulu xa kukho umnqweno omangalisayo wokufumana iimveliso ezintsha, iinkonzo kunye nezicelo kwi-intanethi. Kuthatha ixesha kunye nomfutho ukwakha oko kuthembeka kunye negunya, nangona kunjalo!
Nov 30, 2012 ngo-4:49 AM
Amashishini amaninzi aqala ukusebenzisa iwebhusayithi ukuqhuba ngakumbi
itrafikhi kwiphepha labo leshishini kunye ne-Twitter, iphakathi kwezona zininzi
iindlela ezidumileyo zokusebenzisa imidiya yoluntu ukuthengisa.